पहिरोले देविस्थानको हुल्दी गाउँनै उच्च जोखिममा : गाउवासी घरवास छोडेर जंगलतिर ! – ebaglung.com
२०७४ श्रावण २०, शुक्रबार १४:००	Home Slider, Top News, प्रमुख समाचार
निसीखोला र ढोनपामा गरी पहिरोमा पररे मृत्यु हुनेहरुको संख्या ६ पुग्यो !
(घटनास्थलबाट सहकर्मी डम्मर बुढा मगरको रिपोर्ट ।)
बुर्तिवाङ २०७४ साउन २० । आज विहान ७.३० बजेको समयमा वर्षासँगै बगेकोे पहिरोले निसीखोला गाउपालिका १ साविक देविस्थान गाविसको हुल्दी गाउँ पुरै जोखिममा परेको छ । सो पहिरोमा परी लाल बहादुर सिँजालीको घर पहिरोले बगाउँदा उनकीे ७६ वर्षिया आमा खगिशरा सिँजाली मगर बेपत्ता बनेकी छिन । उनको स्थानीयवासीले खोजी गरिरहेका छन् । तर उनको स्थिति अज्ञात छ । उनलाई जीवितै उद्धार गर्न सकिने अवस्थाा नरहेको उद्धारमा संलग्नहरुले बताएका छन् । घटनास्थलमा प्रहरी र स्थानीयले उद्धार कार्य गरिरहेका छन् ।
पहिरो करीव २ सय मिटर लामो छ । निरन्तर पहिरो बगी रहेकोले हुल्दी गाउँका १५० घरधुरीका करीब ७ सय जनता पहिरोको जोखिमबाट बच्न गाउ माथीको दहको जंगलतिर लागेको स्थानीयले बताएका छन् । चौपायाहरु भने पहिरोमा परेको उनिहरुको भनाई छ ।
पहिरो बगिरहेको छ, थामिएको छैन, यहिक्रम जारी रहे ठुलै पहिरो खसेर निसी खोला नै थुनिने खतरा रहेको स्थानीयले बताएका छन् ।
शुक्रबार विहान आएको बाढी पहिरोमा परी ढोरपाटन नगरपालीका र निसीखोला गाँउपालिकामा गरी ६ जनाको मृत्यु भएको छ । पहिरोका कारण घर पुरिदा ढोरपाटन नगरपालिका अधिकारीचौरका ५५ बर्षिय ओमप्रकाश विक (हुमे)को मृत्यु भएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङका अनुसार सो घटनामा मृतकका भाई वर्ष ३६ को गुन्जमान विक र बुहारी वर्ष ३४ की गौमती विक, मृतकको उद्धार गर्न जाँदा घाईते भएका र निजका श्रीमती, छोरीहरु वर्ष १६ की कृष्ण विक, वर्ष ९ की दालमायाँ बिक र वर्ष ६की बिक पहिरो आउदै गरेको थाहा पाई भागेर ज्यान बचाएका थिए ।
पहिरोको कारण निसीखोला गाउपालिकाको वडा न २ मा एकै परिवारका चार जानाको मृत्यु भएको छ। करिब तीन सय मिटर माथीबाट आएको पहिरोले घर पुरिएर उनीहरुको मृत्यु भएको हो । मृत्यु हुनेमा बर्ष ६७ का मनिमान छन्त्याल उनको श्रीमती बर्ष ६३ की नन्दिकला छन्त्याल , बुहारी बर्ष २२ कि बिन्दु छन्त्याल र छोरी बर्ष १८ कि गिता छन्त्याल रहेका छन् । अहिलेसम्म तीन जनाको शव भेटिएको र एक जनाको खोजी कार्य जारी छ ।
यती माथीबाट निरन्तर बगिरहेको छ पहिरो
निसीखोला- २ बाहुन गाउँबाट सहकर्मी कुम्बिर विश्वकर्माले पठाएको तस्वीर:
निसीखोला- २ बाहुन गाउँमा पहिरोमा घर पुरिएर एकै परिवारका चार जनाको ज्यान गएको छ । घटनास्थलमा स्थानीयले उद्धार गरी शव निकाल्दै र मृतकहरुको शव ।
एक पटक सुन्नै पर्ने गीत : तिर्खामा पानी नदिनेले पछि अमृत दिदा के काम ?